Seville ၏ပုံပြင်များ၊ လမ်းများ၏မူလအစမှ Pedro el Cruel သို့ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ယဉျကြေးမှု, ဆီဗီလာ
Seville သည်အဆုံးမဲ့အပြင်ယဉ်ကျေးမှုကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် သငျသညျမွို့၌လုပ်နိုင်အစီအစဉ်များသူတို့၏ပုံပြင်များနှင့်ဒဏ္legာရီများသည်လှပပြီးအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်များပြားသည်။ ၎င်း၏မူလရင်းမြစ်မှာအနည်းဆုံးရောမမြို့တော်သို့ပြန်သွားကြောင်းသတိပြုပါ ဟစ်စပါလီ ကတည်ထောင်ခဲ့သည် Julius Caesar XNUMX ရာစုဘီစီ၌တည်၏။
၎င်းသည်မလုံလောက်သကဲ့သို့၊ အလယ်ခေတ်ကာလများ၌အန်ဒါလျူဆပ် (စ်) မြို့သည်ကက်စ်တီလီယန်များကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပြန်လည်နေရာချထားချိန်တွင်ကြီးမားသောခွန်အားရရှိခဲ့သည် စိန့်ဖာဒီနန် III ထိုကာလ၌ 1248. ၌၎င်း, ပို။ ပင် သြစတြီးယား၎င်းသည်ကမ္ဘာသစ်နှင့်စပိန်အင်ပါယာ၏စီးပွားရေးစင်တာနှင့်ပထမဆုံးစီးပွားဖြစ်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်လာသည့်အခါ။ ဤမျှကြွယ်ဝသောသမိုင်းသည်ဒဏ္myာရီပုံပြင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သိလိုလျှင် Seville ၏ဒဏ္.ာရီငါတို့သည်သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။
1 လှပသော Susona ၏ဇာတ်လမ်း
2 DoñaMaría Coronel နှင့်ပွက်ပွက်ဆူနေသောဆီ
3 Seville ဒဏ္inာရီတွင်ထင်ရှားသောမင်းသား King Pedro I ၏ခေါင်းဆောင်
5 Suppille ၏ဒဏ္amongာရီများထဲမှဂန္ထဝင် Puppy ၏သမိုင်း
6 Calle Sierpes ၏ဒဏ္.ာရီ
လှပသော Susona ၏ဇာတ်လမ်း
မြို့၏အကြမ်းဖက်မှုအတိတ်သည်ဤဇာတ်လမ်းတွင်ဆပ်ဗီးလ်ဒဏ္theာရီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလယ်ခေတ်ကဂျူးလူမျိုးများနေထိုင်ရာ Seville တွင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျူးများသည်မြို့တော်ကိုထိန်းချုပ်ရန် Moors နှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြသည်။
အစီအစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်၏အိမ်၌သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့သည် Diego Susón, အဘယ်သူ၏သမီးthroughoutရိယာတလျှောက်လုံးသူမ၏အလှတရားကျော်ကြားခဲ့သည်။ အဲဒါကိုခေါ်တယ် Susana ဘင်Susón သူသည်လူငယ်လူကြီးတစ် ဦး နှင့်လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသည်သူ၏အိမ်တွင်ပေါက်ဖွားလာခြင်းကြောင့်သူဘာဖြစ်မည်ကိုသူကိုယ်တိုင်သိသည်။ အစီအစဉ်မှာမြို့၏အဓိကမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်များကိုလုပ်ကြံရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူမချစ်သူရဲ့ဘဝကိုကြောက်နေပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ သူဟာအဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်သူ့မိသားစုနဲ့ Sevillian ဂျူးတွေအားလုံးကိုအန္တရာယ်ပြုနေတယ်ဆိုတာသူမသိခဲ့ပါဘူး။
Susona ၏ဖခင်အပါအ ၀ င်ကြံစည်မှု၏ခေါင်းဆောင်များအားဖမ်းဆီးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအကြောင်းအာဏာပိုင်များအားလူကြီးလူကောင်းကသတိပေးရန်အချိန်မကြာခဲ့ပါ။ သူတို့ကရက်အနည်းငယ်ဆွဲထားခဲ့သည် Tabladaမြို့ထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကွပ်မျက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာ။
Susona သည် Seville ရှိMaría Luisa ပန်းခြံရှိ tile တစ်ခုတွင်ကိုယ်စားပြုသည်
ထိုမိန်းမငယ်ကိုသူမအားသစ္စာဖောက်ဟုယူဆသောလူများက၎င်းနှင့်သူမနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိသည့်လူကြီးလူကောင်းများကငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ဒီနေရာကနေဒဏ္legာရီနှစ်ခုဟာဗားရှင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ပထမ ဦး ဆုံးအရသူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတော်၏ဘုန်းတော်ကြီးကိုအကူအညီတောင်းခဲ့သည် Toledo ၏ Reginaldoသူမသည်တရားသေလွှတ်ပြီး ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူမတွင်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းကြီးရှိသည့်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီးသူသည်ငြင်းပယ်ခံရပြီးနောက် Sevillian စီးပွားရေးသမားကိုချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။
သို့သော်ဒဏ္endာရီသည်၎င်း၏အဆုံး၌ထပ်မံပေါင်းစည်းသည်။ စူစိုနာကွယ်လွန်သောအခါသူ၏အလိုတော်ကိုဖွင့်ခဲ့သည်။ သူကဆန္ဒရှိဟုပြောသည် သူ၏ခေါင်းကိုဖြတ်တောက်။ သူ၏အိမ်တံခါးဝတွင်သူ၏စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သငျသညျမှတဆင့်သွားလျှင်သင်ယနေ့မြင်နိုင်ပါတယ် သေမင်းလမ်းစူစိုနာ၏အိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော ဦး ခေါင်းခွံပါသောကြွေပြားတစ်ခု။ တကယ်တော့ထိုလမ်းကြောင်းကိုမိန်းကလေးအမည်ဖြင့်လည်းလူသိများသည်။
DoñaMaría Coronel နှင့်ပွက်ပွက်ဆူနေသောဆီ
Seville မှဒဏ္legာရီတွင်ဆပ်ပြာအော်ပရာများစွာပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်လက်စားချေလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြို့တော်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ချိန်သို့ရောက်စေသည်။ မစ္စစ်မာရီယာ Coronel သူမသည်တစ် ဦး Castilian အမျိုးသမီးသမီးဖြစ်ခဲ့သည် မစ္စတာ Alfonso ဖာနန်ဒက် Coronel၏ထောက်ခံသူသူကားအဘယ်သူ Castile ၏ Alfonso XI။ သူလည်းလက်ထပ်ခဲ့သည် Don Juan de la Cerdaအလှည့်၌သူ့သား၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအကြားစစ်ဆင်ရေး, ဟင်နရီ IIသူကသူ့မိထွေးရင်ဆိုင်ခဲ့သည့်အခါ Pedro ငါ ရာဇပလ္လင်မှဆက်ခံဘို့။
ဤအကြောင်းကြောင့်သူသည် Don Juan de la Cerda ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီးသူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးသူ၏မုဆိုးမကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။ Pedro ငါသူမကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမသိခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူသူမကိုမြင်သောအခါသူဖြစ်ခဲ့သည် သူမ၏နှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်၏။ သို့သော်DoñaMaría Coronel သည်သူမ၏ခင်ပွန်းအားလုပ်ကြံရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး Sevillian ခရစ်ယာန်သီလရှင်ကျောင်းသို့ ၀ င်ရောက်လာသူကိုမပြောပြလိုပါ။ Santa Clara.
သူမသည်သူမမယားငယ်အဖြစ်ထွန်းလင်းရန်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်“ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော” ပက်ဒရို ၁ ကိုလည်းသူရခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင်သူမအူရီရယ်လ်အပြေးသမားနှင့်ကျွေးမွေး, ည့်ခံပြီးသူသည်ခရစ်ယာန်သီလရှင်မီးဖိုချောင်ထဲဝင်ပြီး၊ ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေနံသွန်းလောင်းလေ၏ မျက်နှာကိုဖြတ်ပြီးအဲဒါကိုပုံဖျက်ဖို့။ ဤနည်းအားဖြင့်သူမသည် Pedro I ကိုသူမကိုတစ်ယောက်တည်းထားရစ်ခဲ့သည်။
သူသည်မိခင်archကရာဇ်မင်းကွယ်လွန်သွားခြင်းကိုသူ၏မိတူဖကွဲညီအဲန်ရီကီ ၂ ၏လက်ချက်ဖြင့်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်သိမ်းဆည်းထားသောပစ္စည်းများကို Coronel အစ်မများထံ ပြန်၍ ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအမျိုးသမီးနှစ် ဦး ကိုတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့သည် Santa Inés၏သီလရှင် မိမိအဘ၏နန်းတော်ခဲ့သောနန်းတော်၌တည်၏။ ပထမဆုံး Abbess သည် ၁၄၁၁ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင်ဆုံးပါးသွားသောDoñaMaría Coronel ဖြစ်သည်။
Seville ဒဏ္inာရီတွင်ထင်ရှားသောမင်းသား King Pedro I ၏ခေါင်းဆောင်
အတိအကျရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောကတ်စတီလီယန်archကရာဇ်သည်အခြားနိုင်ငံများဖြစ်သောအခြားသောစစ္ဗီးလ်ဒဏ္inာရီတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာ။ သူ၏မြို့တော်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောညတွင်ပက်ဒရိုသည်သူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် နီဘလာရဲ့သားကိုရေတွက်ပါထောက်ပံ့သောမိသားစု ဟင်နရီ IIငါတို့သညျသူ၏ပထွေးကိုပြောသည်အတိုင်း, ဓားများသည်မကြာမီထွက်လာပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သူတစ် ဦး ကိုသတ်ပစ်လိုက်သည်။
သို့သော်, Duel နှိုး အမျိုးသမီးကြီး သူမဆီမီးခွက်နှင့်ထွက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူမလူသတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်အခါအံ့အားသင့်, သူမမြေပေါ်သို့တင်ဆောင်လာသောမီးခွက်ကိုမကျဘဲဘဲမဟုတ်ဘဲ, သူမ၏အိမ်၌မိမိကိုမိမိပိတ်ထားရန်ပြန်လာ၏။ ဟန်ဆောင်ပန်ဒရိုကသားကောင်ရဲ့မိသားစုကိုကတိပေးခဲ့တယ် ငါအပြစ်ရှိများ၏ ဦး ခေါင်းကိုပယ်ဖြတ်မယ် သူသေဆုံး၏နှင့်အများပြည်သူထဲမှာဖော်ထုတ်။
သူမအဟောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်ကိုသိသောကြောင့်သူသည်သူမအားရှေ့မှောက်သို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးသူမအားရာဇ ၀ တ်သားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်ဘုရင်ရှေ့တွင်မှန်ကိုထည့်ပြီး "မင်းမှာလူသတ်သမားရှိတယ်" ထို့နောက် Don Pedro ကခေါင်းကိုဖြတ်ပစ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည် စကျင်ကျောက်ရုပ်ထုတစ်ခု သူတို့သည်သူ့ကိုအရိုအသေပြုပြီးသူသည်သစ်သားနယ်ပယ်တွင်နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ သူသည်သေတ္တာကိုအကြမ်းဖက်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တူညီသောလမ်းပေါ်တွင်ထားခဲ့ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသေဆုံးသည်အထိဖွင့ ်၍ မရပါ။
ဒီနေ့ခေတ်တောင်မှလမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြူခိုးကိုတွေ့နိုင်တယ်၊ ရှငျဘုရငျကို Don Pedro ၏ ဦး ခေါင်း။ ပြီးတော့ဒီဒဏ္legာရီအချက်ကိုမှတ်မိဖို့သက်သေခံတစ်ယောက်နေထိုင်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုခေါ်ပါတယ် Candil လမ်း.
ရှငျဘုရငျကို Don Pedro ၏ ဦး ခေါင်း
ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအလယ်ခေတ်မှာဆက်ဗီးလ်အကြောင်းနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းပြောပြဖို့ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ ဒါဟာဆယ်ငါးရာစုအတွင်းရှိရှိကွောငျးကိုပြောပြသည် မင်္ဂလာပါ ထဲမှာ လမ်းမလမ်း၊၏ရပ်ကွက်အတွင်းပိုင် စန်း Lorenzoအမျိုးမျိုးသောလူတို့ရပ်တန့်ဘယ်မှာ။
ဒီတော့အဲဒါဟာဓလေ့ထုံးစံပဲ မင်္ဂလာ Sacramentလူများဒူးထောက် ဘားတန်းရှိသူငယ်ချင်းများကသူချဉ်းကပ်လာသည်ကိုကြားလိုက်သောအခါစီတန်းလှည့်လည်သွားသောအခါဒူးထောက်လိုက်ကြသည်။ အားလုံး။ ခေါ်ဆိုမှု Mateo « el Rubio » သူသည်ဇာတ်ကောင်များဖြစ်လို။ သူ၏သူငယ်ချင်းများကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသည်ဟုစွပ်စွဲကာသူသည်ဒူးထောက်တာမဟုတ်ကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့သည်။
ညာဘက်ထိုအခိုက်မှာတစ် ဘုရားသခင့ရောင်ခြည် ကံဆိုးစွာဖြင့် Mateo သည်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျောက်တုံးသို့လှည့်လိုက်သည်။ ယနေ့ပင်လျှင် Buen Rostro လမ်းပေါ်တွင်အချိန်ကုန်လွန်ခြင်းကြောင့်ဝတ်ဆင်ထားသောထိုပစ္စည်းမှယောက်ျား၏ကိုယ်ထည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျောက်ခေတ်လူ.
Suppille ၏ဒဏ္amongာရီများထဲမှဂန္ထဝင် Puppy ၏သမိုင်း
အကယ်၍ သင်သည် Andalusian မြို့ကိုသွားရောက်ပြီးဖြစ်ပါက၎င်းသည်သူနေထိုင်သူများအတွက်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းသင်ကောင်းစွာသိလိမ့်မည် Triana ခွေးကလေး, သူတို့လူကြိုက်များသောဗတ္တိဇံခဲ့ကြရသောအမည် အဆိုပါသက်တမ်းကုန်၏ခရစ်တော်။ သန့်ရှင်းသောသီတင်းပတ်တိုင်းသည်သူ၏ညီအစ်ကိုအသင်းအပင်းသည်သူ့ကိုဘေစလီကာမှလှည့်ပတ်စီးဆင်းစေသည့်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ၊ Seville ၏ဒဏ္amongာရီများထဲမှဤဇာတ်ကောင်ကိုဇာတ်ကောင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသူများစွာရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုမှာအောက်ဖော်ပြပါတို့ကိုသင်ပြောပြလိမ့်မည်။
အဲဒီမှာဂျစ်ပစီယောက်ျားလေးတစ် ဦး တိတိကျကျအမည်ပေးခဲ့တယ် ခွေးရူး နေ့တိုင်း Barcas တံတားကိုဖြတ်ပြီးမြို့ရဲ့ဆင်ခြေဖုံး Triana ကနေ Seville ကိုသွားခဲ့တယ်။ သူ့ကိုတွေ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲဒီခရီးကိုသွားတာသံသယဝင်လာတယ် သူကသူ့ဇနီးကိုသွားလည်တော့မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသူမသည်သူမနှင့်ကာယဆက်ဆံမှုရှိခဲ့သည်။
Puppy လို့လူသိများတဲ့ Expiration of Christ
တစ်နေ့တွင်သူသည် Vela ရောင်းချမှုဘေးတွင်သူ့ကိုစောင့်။ ခုနစ်ကြိမ်ခေါက်ခဲ့သည်။ လူအတော်များများကကောင်လေးရဲ့အော်သံကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့တွင်ပန်းပုဆရာလည်းဖြစ်သည် Francisco Ruiz Gijón, အဆုံး၌သက်တမ်းကုန်၏ခရစ်တော်၏ပုံ၏ရေးသားသူဖြစ်လိမ့်မည်။
လူငယ်၏နာကျင်မှုကိုအံ့အားသင့်စေပြီးသူသည်ကျော်ကြားသောခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖော်ထုတ်ရန်သူ၏မျက်နှာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ စကားမစပ်သူဟာလူသတ်သမားရဲ့ဇနီးကိုသွားလည်တော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှမသိတဲ့ညီအစ်မတစ်ယောက်ဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးတွေဟာလျှို့ဝှက်ထားတယ်။
Calle Sierpes ၏ဒဏ္.ာရီ
ဤအလယ်ဗဟိုလမ်းသည် Seville တွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်မြို့သူမြို့သားအားလုံးက၎င်း၏အမည်အတွက်အကြောင်းပြချက်ကိုမသိကြပါ။ ၎င်းသည် Seville ဒဏ္endာရီကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။ သူတို့က ၁၅ ရာစုတုန်းကအဲဒီအချိန်တုန်းကလို့ပြောခဲ့တယ် Espalderos လမ်း အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကလေးများသည်ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်။
သူတို့ထံမှနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမကြားရသေးသောကြောင့်ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေသည်ထိုဒေသရှိနေထိုင်သူများအကြားထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် Seville ၏ Regent, Alfonso de Cárdenasဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ အကျဉ်းသားတစ် ဦး သည်သူ၏လွတ်လပ်မှုအတွက်လျှို့ဝှက်နက်နဲရာကိုဖြေရှင်းရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အထိ
ခေတ် Melchor de Quintana သူသည်ဘုရင်အားပုန်ကန်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုကြောင့်ထောင်ကျခဲ့သည်။ အဆိုပါ Regent လက်ခံခဲ့သည်ထို့နောက်အပြစ်စီရင်သောသူသည်တစ် ဦး ရှိရာအရပ်သို့သူ့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် မြွေကြီး နှစ်ဆယ်ပေရှည်။ အဲဒီမှာအထဲကိုဓားမြှောင်ရှိတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ Melchior ကသူမကိုတိုက်ခိုက်ပြီးသတ်ပစ်ခဲ့သည်။
မြွေသို့မဟုတ်မြွေသည်၎င်း၏နေထိုင်သူများကိုစိတ်ချစေရန် Calle Espalderos တွင်ပြသခဲ့သည်။ သူတို့ကမြို့ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးကလာကြည့်တာလို့ပြောကြတယ်။ အဲဒီအချိန်ကစပြီးလမ်းမကိုခေါ်လာတယ် Sierpes ၏.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် Seville ၏လူကြိုက်အများဆုံးဒဏ္legာရီများကိုပြသခဲ့သည်။ များစွာသောအခြားသူများရှိပါတယ် မဟာတန်ခိုးတော်၏ခရစ်တော်၏ Santa Librada ဒါမှမဟုတ်၏ သူတော်စင် Justa နှင့် Rufina။ ဒါပေမဲ့ဒီပုံပြင်တွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ထားသွားမှာပါ။ သင်မြို့ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ပျော်ပါ။ မင်းကိုထားခဲ့ပါ ဒီလင့်ခ်တွင် Seville မှသင်လေ့လာနိုင်သောလေ့လာရေးခရီးများပါရှိသည် အကယ်၍ သင့်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာရန်အချိန်ရှိပါကသင်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » ဆီဗီလာ » Seville ၏ဒဏ္endsာရီပုံများ